Soosaarashada Shiinaha ee Qurxinta Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Farshaxanka Milucky
Cuntada Isku Darka
Qurxinta qurxinta waa mid jilicsan oo ka samaysan waxyaabo si dhaqso leh u kacaya (PU). U adeegso sheygan ahaan qurxinta, kadeedka walaaca ama madadaalo & ciyaar! Dhiirrigelinta bakhaarada alaabada ayaa ah qaab aad u muhiim ah oo lagu iibiyo, sidaa darteed milkiileyaal badan oo kuwa wax lagu ciyaaro ayaa aad u muhiim ah marka loo eego xayeysiinta. Gaar ahaan dhiirrigelinta fasaxa, haddii hirgelinta saameyntu ay fiicantahay, waxay u keeni kartaa iibka iibka dukaanka toy-ga, sidaa darteed, inta badan dukaanka caruusadda ee fasaxa ayaan lumin doonin fursadahaas aadka u wanaagsan ...
Qurxinta qurxinta waa mid jilicsan oo ka samaysan waxyaabo si dhaqso leh u kacaya (PU). U adeegso sheygan ahaan qurxinta, kadeedka walaaca ama madadaalo & ciyaar! Dhiirrigelinta bakhaarada alaabada ayaa ah qaab aad u muhiim ah oo lagu iibiyo, sidaa darteed milkiileyaal badan oo kuwa wax lagu ciyaaro ayaa aad u muhiim ah marka loo eego xayeysiinta. Gaar ahaan dhiirrigelinta fasaxa, haddii hirgelinta saameyntu ay fiicantahay, waxay u keeni kartaa iibka iibka dukaanka toy-ga, sidaa darteed, inta badan dukaanka caruurtu ku cayaarto fasaxu kama maqnaan doonaan fursadahaas aadka u wanaagsan. Meelo kala geddisan, isticmaalka waxyaabaha carruurtu ku ciyaaraan ayaa soo jiidan kara dad badan, sida suugaanta shaneemo, coke, oo lagu qurxin karo waxyaabaha caruurtu ku ciyaaraan, sanka oo ku ciyaara cirifka, ama alaabada lagu qurxiyo ayaa lagu gaari karaa saamaynta dhiirrigelinta. Qolka ilmaha, ku qaad qurxinta caruusadda, waxay ku siin kartaa inay ka dhigto jacaylku in uusan gebi ahaanba ku xirnaan doonin nolosha qofka weyn, uusan u kala firdhi doonin si aan qummanayn qolka fadhiga, barashada ama u doodista qolka jiifka, uma oggolaanayo waalidnimada nolosha oo dhan inay khalkhal gasho, soo noqoto booska farxadda leh ee kalgacayl gaar u gaar ah. Maaddadu aad ayey u nabdoon tahay, jirka waxyeello uma leh, majirto khatar badbaado leh.
Isula dabiiba squishies:
Jilicsan, jilicsan taabashada iyo udgoonka, Squishys waxay kuu oggolaaneysaa inaad is dejiso oo aad isku buuqdo. Ula cayaaro iyaga markii la doono oo burburi, squishies had iyo jeer waxay ku noqdaan qaabkoodii hore, laakiin si tartiib ah. Farxad iyo raynrayn, waad nasan kartaa saacado.
U kaxee gacmahaaga meelkastoo aad tagtid, waxay si buuxda ugu tagi doonaan jeebkaaga, boorsadaada ama ku laalaadaan taleefankaaga. Ka dib waxaad u kaxayn kartaa banaanka si aad u nasato inta lagu jiro imtixaanka walaaca leh, ballan caafimaad ama si fudud aad baskaaga u sugeyso subaxa hore.
Hore: Cuntada Isku Darka
Xiga: Character Squishy
Is qurxinta Qurxinta
Kubadda Culeyska Culeyska Keychain
Cressctress Stress Kubadda
Kubadda Dhiirrigelinta Cadaadiska
Hay hayaha Pu Foam
Kubadda Cadaadiska Cuntada
Gawaarida Cadaadiska Gaadiidka